बर्दियामा पाहुना हुन आएका १४ बर्षिय किशोरले एकै दिन ४ बालिकालाई क 'रणी ग’रेपछि…. - Rising Dainik
बर्दियामा पाहुना हुन आएका १४ बर्षिय किशोरले एकै दिन ४ बालिकालाई क ‘रणी ग’रेपछि….
February 26, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on बर्दियामा पाहुना हुन आएका १४ बर्षिय किशोरले एकै दिन ४ बालिकालाई क ‘रणी ग’रेपछि….
गुलरिया : १४ वर्षीय एक किशोरले बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा एकै दिन चार बालिकालाई क’र णी ग रेको घ’टना सार्वजनिक भएको छ। ती किशोरबाट भाँडाकुटी खेलिरहेका ८, ६ र ५/५ वर्षका नाबालिका क’र णी भ एको पी’ डित पक्षले बताएको छ।
आ’रोपित किशोर बर्दियाकै बारबर्दिया नगरपालिकाबाट बाँसगढीमा आफन्तकहाँ पाहुना आएका थिए। उनले कसैलाई नभन्न ध ‘म्की दिएपछि बालिकाहरूले घ’टना लुकाएका थिए। तर, घ’टनाबाट जोगिएकी एक बालिकाले अभिभावकलाई सबै कुरा बताएपछि वास्तविकता बाहिरिएको हो। उनीहरू फागुन ५ गते विद्यालयबाट फर्किएर खेलिरहेका थिए।
‘बालिकाहरू दिउँसो भाँडाकुटी खेल्दै थिए। पाहुना आएका किशोरले नजिकैको ट्रेलरबाट टालाटुली लगेर बालिकाको हात र खु ‘ट्टा बाँ ‘धे अनि पालैपालो क’ रणी ग रेछन्’, एक पी’ डितका बुवाले भने। पी’ डितहरूको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट आइसकेको छैन।
पी’ डित पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। घ’टना मिलाउन खोजेर हो कि किन अनुसन्धानमा एकदम ढिलासुस्ती भएको पी’डितको गु’नासो छ। ‘नि’कृष्ट एवं ज’घन्य अ’ पराध भएको छ, पी” डितलाई कुनै पनि हालतमा का’रबाही हुनुपर्छ’, एक अभिभावकले भने।
प्रहरीले आ’रोपित बालकलाई नि’यन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरीले घ’टनालाई बालविज्ज्याईअन्र्तगत राखेर सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘घ’टना प्रमाणित भए पी ‘डकले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउँदैनन्।’ अन्नपूर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
केहिदिन अघि जन्मेको करिनाको छोरालाई किन गरे ज्योतिषले यस्तो दा’बी
स्याङ्जामा पहिरोमा परि दुईको मृ’त्यु, नौ बे’पत्ता
ओलीको व्यंग्य: मलाई हटाउन लड्डु खाएजस्तो सजिलो छैन
BREAKING NEWS …… प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डकाे ‘सरप्राइज’